तपाईलाई थाहा छ मानव शरीरसम्बन्धी यी पाँच रहस्य ? | Rajmarga
मानव शरीरसँग सम्बन्धित कयौ प्रकारका भ्रान्तिहरु अझै कायमै छन्। तमाम जागरुकतापछि पनि मानिसहरु कयौ मिथकहरुमा बढी विश्वास गरिरहेका छन् । यहाँ त्यस्तै मानव शरीरसँग सम्बन्धित पाँच भ्रान्ति उल्लेख छ।
१. मोटा मानिसमा मेटोबालिज्मको दर कम हुँदैन । मानिसहरु मान्दछन् कि मोटा मानिसमा मेटाबाँलिज्मको दर कम हुन्छ । तर यस्तो हुँदैन किनभने मोटो मानिसहरुको शारीरिक अंक ठुलो हुन्छ र दुब्ला मानिसको तुलनामा उनीहरु बढी ऊर्जा खर्च गर्दछन् ।यस्तो अवस्थामा मोटा मानिसहरुको मेटाबाँलिज्मको दर बढी हुन्छ । यसबारेमा विस्तृत जानकारीका लागि जर्नल अफ न्युट्रीशनल साइन्सेज हेर्न सकिनेछ ।
२. यदि तपाईको पेट निकै ठुलो छ, तपाई मोटो हुनुहुन्छ, तब तपाईको शरीरलाई स्याउजस्तो भन्ने गरिन्छ , तर तपाईको हिप र थाईको तौल र साइज ठुलो छ भने त्यसलाई नशपाती आकारको भनिन्थ्यो ।पहिला यो मानिथ्यो कि स्याउ आकारवाला व्यक्तिमा मुटुसम्बन्धी रोग हुने खतरा बढी हुन्छ । मधुमेह हुने आशंका बढी हुन्छ । तर क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा तपाईको शरीरको आकार जुनसुकै होस तर यदि तपाईको तौल बढी छ भने त्यो खतरनाक हुने देखियो । स्रोत: युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, डेभिस
३. हरेक महिलाको सपना हुन्छ कि आफ्नो उचाई आवरग्लासको जस्तो होस् । तर यस्तो हुँदैन । म्यानचेस्टरमा ३डी बडी स्क्यानरबाट २४० बेलायती महिलाको उचाई मापन गरेर हेर्दा ६३ प्रतिशत महिलाको कम्मर, काँध र छातीको साइज एकैजस्तो थियो । यसलाई तपाई आयाताकार भन्न सक्नु हुन्छ । केवल १३ प्रतिशत महिलाको शरीर परफेक्ट आवरग्लासजस्तो थियो । यद्यपि यो पनि हेरियो कि उमेर बढ्दै जाँदा महिलाहरुको आकार आयाताकारजस्तो हुन्छ । ५६ वर्षभन्दा बढी उमेरका ८० प्रतिशत महिलाहरु यो वर्गमा आउँछन्। स्रोत म्यानचेस्टर युनिभर्सिटी मेट्रोपोलिनेशन युनिभर्सिटी
४. पुरुषको स्तन पनि कतिपय अवस्थामा बढ्दछ । जनमान्यता थियो कि बढी वियर पिउँदा यस्तो हुने गर्दछ । तर यो स्तनमा कोशिकाहरु बढेका कारण हुन्छ ।मोटो र बढी तौल भएका व्यक्तिमा यस्तो हुने गर्दछ । किनभने बोसोबाट फिमेल हर्मोन इस्ट्रोजन उत्पादन हुन्छ, जसबाट स्तनको आकार बढ्ने गर्दछ । स्रोतः युके नेशनल हेल्थ सर्भिस
५. टर्कीका अनुसन्धानकर्ताहरुले २०० जना पुरुषमा सर्भे गरेपछि पाइयो कि जसको तौलको अनुपात बढी हुन्छ । अर्थात बीएमआई (बडी मल इन्डेक्स) बढी हुन्छ, उनीहरु ओछ्यानमा लामो समयसम्म संसर्ग गर्ने क्षमता राख्दछन् । यस्ता मानिसको औषतः संसर्गको समय ७.३ मिनेट हुन्छ, जबकि दुब्ला मानिसहरु ३ मिनेटमै स्खलित हुन्छन् । शायद दुब्ला मानिसमा टेस्टोस्टोरोनको मात्रा कम हुन्छ । यस्तो धेरै मोटा मानिसहरुमा पनि हुन्छ ।मोटा मानिसहरुको सेक्स गर्ने क्षमता भलै बढी हुन्छ, तर उनीहरुलाई सुरु गर्नमै समय बढी लाग्ने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा मोटा मानिसहरुमा सेक्स गर्न लायक इरेक्सन हुन पाउँदैन । स्रोतः इन्टरनेशनल जर्नल अफ इन्पोटेन्ट रिसर्च (लिन्डा गेडेस, बीबीसी हिन्दी)
Previous post: रेशम चौधरीलाई जेलभित्रै शपथ!
Next post: रुसको नेतृत्व ६ वर्षका लागि पुनः पुटिनको काँधमा, पुटिनले यसरी निकाले फराकिलो जित
काठमाडौं उपत्यकाका थप ६४५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण